Gudiga EACC oo sheegay in wakiilada aqalka hoose ee countiga Kisii ay darmuusho ku soo iibsaden 8,000 oo shillinka dalka ah – The Voice of Northeastern Kenya
Gudiga EACC oo sheegay in wakiilada aqalka hoose ee countiga Kisii ay darmuusho ku soo iibsaden 8,000 oo shillinka dalka ah
Star FM October 15, 2016
Gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqa ee marka magaciis la soo gaabiyo loo yaqaano EACC ayaa warbixin u soo saaray waxa ku qeexan in wakiilada aqalka hoose ee barlamaanka ee loo yaqaano ee MCAyada ay darmuusho ku soo iibsaden 8,000 oo shillinka dalka ah ayaa halkii darmuushba loogaga soo iibiyay waxa sidoo kale ay soo iibsaden saxradaha lagu adeegto oo halki saxradba lagu soo iibiyay 6,490 shillinka dalka ah.
EACC ayaa warbixinteeda wax ay ku sheegtay in qiimahaasi u aad uga sareeyo qiimaha magaalada ay ka joogan darmuuska iyo saxradaha waxana ay taas u soo qaadatay sida countiyada ay ugu takarfalaayan lacagaha dadweynaha.
Waxana gabihaanba ay tan ka soo horjeeda in dawladaha countiyada ay sahan ku saabsan qiimaha badeecooyinka kala duwan ay ka joogan suuqyada in ay sameeyan ka hor inta aysan bixin khandaraasyada badeecooyinka kala duwan loogu soo iibinaayo countiyadooda.
Waxa sidoo kale warbixinta gudiga ku xusan khandaraas qarsoon oo ay dawladda countigaas ku soo iibsatay komputarada gacanta lagu qaato ee loo yaqaano Tabletska kuwaas oo ay dawladda ku kharash gareeysay lacag dhan 7.6 milyan halka suuqa loogaga soo iibsan karay lacag dhan 4 milyan oo shillinka dalka ah.
Warbixintan ayaa waxa shaaca ka qaaday kuxigeenka sarkaalka madaxa fulinta ee gudiga EACC Michael Mubea maalinta arbacada ee isbuucan.
← Xoghaya ururka shaqaalaha ee COTU Francis Atwoli oo ugu baaqay gudiga EACC in ay faraha kala baxan lacaga ay qaatan dadka hawlgabka noqday
Ciidamada booliska oo dib u helay lacag dhan 1.4 milyan oo shillinka dalka ah →